Microsoft na-ebuputa MySpace ... oghere ... er ... Error | Martech Zone
Wenezde, August 2, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Enwetara m njehie na-esote mgbe ịpị bọtịnụ Search gafee ụdị ọchụchọ kachasị na Microsoft Spaces na Mozilla Firefox:
Iwu Ndị Na-achịkwa ontanetị:
Don'tkwesighi idetuo, ị nwere ego zuru iji zụta ha ma chekwaa onye ọ bụla ndakpọ olileanya.
Cheta na e nwere ihe nchọgharị ndị ọzọ ọzọ n'ebe ahụ, e nwere n'ezie! You chefuru iwu ndị ahụ ugbua?
I nwere ego zuru oke iji mepụta ihe dị iche. Mee # 1 ma ọ bụ mee ihe dị iche.
Aug 2, 2006 na 8:17 PM
Gbalịa ịwụnye .net kpuchie, nsogbu ahụ dinara gị echere m.
Aug 2, 2006 na 8:30 PM
Enweela m .NET kpuchie ma na-agba ọsọ. M n'ezie ịzụlite na. NET. Ọ bụrụ na nke a bụ n'ezie, okwu ahụ, mgbe ahụ ozi nnabata ka mma ka mma. Ma ọ bụ ikekwe edemede nke na-anwale usoro ahụ tupu ibute peeji ahụ.
Aga m anwale ọzọ na ụbọchị ole na ole.
Aug 2, 2006 na 9:30 PM
mgbe m buuru oghere.live.com anaghị m achọ njikọ SEARCH. Ikekwe ha wepụrụ ya maka ịrụzi?
Kedu ụzọ ọ bụla, ị kọọrọ ha ahụhụ a dị ka onye nwere ọrụ? Enwere m obi abụọ na ndị otu Microsoft na-agụ blog a.
Aug 2, 2006 na 10:05 PM
Mba, agwaghị m Microsoft ọhụ a. Ekwetaghị m na ndị ọrụ njedebe nke ngwaahịa sọftụwia kwesịrị ịbụ ndị na-ahụ maka ịkọ nchọnchọ. Ekwenyere m na ule siri ike na mmemme mmesi obi ike. Nyere uru nke Microsoft, ekwenyere m na Microsoft nwere ike imeli nke a.
Nke ahụ kwuru, m ga-ekwu n'ụzọ doro anya na abụghị m "Microsoft Basher". A sị na nke a bụ Yahoo!, A gaara m eziga otu ozi ahụ.
A sị na ọ bụ oghere mepere emepe, agaara m ekwupụta ahụhụ dị ka 'onye nwere ọrụ'.